संसद्काे अन्तिम बैठक नयाँ संसद् भवनमा बस्छ : मन्त्री श्रेष्ठ - Harekpal Harekpal
संसद्काे अन्तिम बैठक नयाँ संसद् भवनमा बस्छ : मन्त्री श्रेष्ठ
हरेकपल सम्वाददाता November 1, 2020
काठमाडौ । शहरी विकास मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सिहदरबार भित्र निर्माणाधिन संघीय संसद भवन र ललितपुरका भैसेपाटीमा निर्माण भैरहेको संघीय मन्त्री, प्रदेश मुख्यमन्त्री र प्रदेशप्रमुखको आवास भवन निर्माणको अवलोकन गर्नुभएको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको गौरबको आयोजना अवलोकन गर्ने गर्ने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले दुई स्थानको संरचना अवलोकन गर्नुभएको हो । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयले अन्तर्गत निर्माण भैरहेको संघीय संसद भवन र मन्त्री , मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको आवास भवनको प्रगतिबारे जानकारी लिन मन्त्री श्रेष्ठ निर्माण स्थल पुग्नुभएको हो ।
अवलोकन गर्ने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले तोकिएकै समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाले भन्नुभयो–गुणस्तरमा कुनै कमी कमजोरी नहुने गरी तोकिएकै समयमा निर्माण गर्न सरकारले जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।
मैले यो आशा राखेको छु कि संघीय संसदको अन्तिम बैठक यही भवनमा बस्नेछ–संघीय संसद भवनको अवलोकन गर्ने क्रममा उहाले भन्नुभयो । संघीय संसद भवन आयोजना प्रमुख प्रकृण तुलाधरले कोभिड संक्रमणको कारण निर्माण सम्पन्न हुन केही ढिलो हुनसक्ने बताउनुभयो ।
भन्नुभयो–तैपनि तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्नेगरी कम्पनीलाई दबाव दिइसकेका छौ । उहाले छठ लगत्तै करिब एक हजार मजदुर परीचालन गरी तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्ने लक्ष लिएका छौ । भन्नुभयो–दुई सिफ्ट गरेर भएपनि २४ घण्टा काम गर्नेगरी तयारी भैरहेको छ । केही प्राविधिक कठिनाई बाहेक अन्य कुनै समस्या नभएको उहाको भनाई थियो । शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रमेशप्रसाल सिंहले गुणस्तरमा कुनै कम्परमाइज नहुनेगरी योजना अघि बढिरहेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली ज्युको कार्यकालमा संसदको अन्तिम बैठक बस्न मिल्नेगरी काम गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई निर्देशन दिदै सचिव सिहले भन्नुभयो–समस्या परे तत्काल समाधान गर्नेछौ, कामलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलालले कोभिडको कारण काम गर्न केही समस्या भएको स्वीकार्दै अब जस्तो परिस्थिति भएपनि कामलाई निरन्तर रुपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाले प्रमज्युले भनिर्देशन दिनुभए अनुसार यो संसदको अन्तिम अधिवेशन गर्नेगरी निर्माणलाई निरन्तरता दिएको जानकारी गराउनुभयो । । मन्त्री श्रेष्ठले कोभिड–१९ संग डर नमानी सबै इन्जिनियर , कर्मचारी र मदजुरको स्वाथ्य मापदण्ड पालना गरी कुनैदिनपनि काम नरोक्न निर्देशान दिनुभयो । भन्नुभयो–सबै मजदुरको पिसिरआ गरेर कार्यरत स्थलमै रहनेगरी काम गर्नुस, आवश्यकता परे मन्त्रालयले सहयोग गर्नेछ ।
सिंहदरबारको पुतली बगैचामा १ सय ७३ रोपनी क्षेत्रफलमा प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, अति विशिष्ट व्यक्तिको कार्यालय भवन, संसदीय दल, समिति, सचिवालय, चमेनागृह र प्रिन्टिङ प्रेस भवन रहनेछ । भवन परिसरमा ७ सय सवारी पार्किङ गर्ने व्यवस्था रहेको छ । भवनको गत असोज १ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सिलान्यास गर्नुभएको थियो । चालु आवमा २५ प्रतिशत प्रगति गर्ने योजना भएपनि हालसम्म करिब १२ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको आयोजना प्रमुख प्रकृण तुलाधरले जानकारी दिनुभयो ।
सो परियोजनाको अवधी २०७९ असोज १५ सम्म छ । अब दुई वर्षमा सबै काम सक्नेगरी २४ घण्टै काम भैरहेको उहाको भनाई छ । सो परियोजनाको परामर्शदाता इएनजिआर इष्टवेष्ट डिजिको जेभी हो । मैले भनेको छु ग तोकिएकै समयमा अबको एक महिना भित्र बञ्चरे डाँडाँ ल्याण्डफिल साइटमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । त्यसैगरी भैसेपाटी स्थित मन्त्री , मुख्यमन्त्री, र प्रदेश प्रमुखको निवास अवलोकन गर्न पुग्नुभएका मन्त्री श्रेष्ठले समयमा काम सम्पन्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।
सिंहदरावर भित्र निर्माणाधिन नयाँ संसद भवन
उहाले भन्नुभयो–काम सन्तोषजनक छ , समयमै सक्नेगरी थप मजदुरको व्यवस्थापन गर्नुस । सो परियोजनाका साइड इन्जिनियर प्रमोदकृष्ण कर्माचार्यले कोभिडको कारण केही समय समस्याआएपनि हाल निर्माणमा सन्तोषजनक रहेको जानकारी दिनुभयो । गत कातिक २७ बाट सम्झौता भएर आगामी वर्ष २७ गते सम्पन्न गर्नेगरी तयार भएको मन्त्री २४ वटा मन्त्री निवास उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको भवनको लागत १ अर्ब ३ करोड रहेको छ । मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको निवासको लागत ७२ करोड ४७ लाख छ ।
द्ुवै परियोजनाको बारेमा जानकारी गराउदै शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रमेश कुमार सिहले परियोजना गुणस्तर खस्कन नदिन निगरानी बढाउनुपर्ने बताउदै गुणस्तरमा गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलालले तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण भैरहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ज्युले शिलान्यास गर्नभएको तीनै परियोजनाको उहाकै कार्यकालयमा तयार हुनेगरी तिब्रगतिमा काम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । भन्नुभयो–प्रगति सन्तोषजनक छ , तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न जनशक्ति थप गर्न आवश्यक छ ।
टिपरले ठक्कर दिँदा मोटरसाइकलमा सवार दुईको मृत्यु
वाग्मती प्रदेशका लागि १७४ जना अधिकृतस्तरका कर्मचारी माग
निर्वाचन आयोगको फैसलाले प्रचण्ड–नेपाल समूह आक्रोशित
प्रचण्डले बनाएको पुल उद्घाटन गर्न प्रधानमन्त्री ओली दाङ..
आयोगको निर्णयले पार्टी एकतामा बल पुग्छ :..
ओली पक्षले माघ २३ गते जनसभा गर्ने,..